Jelii na ude achicha ... anwansi! Mụntakịrị hụrụ ya n'anya | Ntụziaka
Ascen Jimenez | 22/03/2021 10:30 | Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka
Enwere m ihe ụtọ a, n'ihi otú o si dị na, karịa ihe niile, ihe kpatara iji kwadebe ya ọ na-ewe anyị obere oge. Emere ya na gelatin flavored, mmiri na ude, o nweghi ihe ozo. Na ọkwa atọ ahụ ị hụrụ na foto ndị ahụ kpụrụ onwe ha, n'ihi ya anyị na-ekwu na ọ bụ kpokọtara.
Childrenmụaka, otu ị chere n’echiche, hụrụ ya n’anya. Ejirila m ya utu jelii ma ị nwere ike họrọ nke ekpomeekpo ma ọ bụ agba na-amasịkarị gị. Rọ ga-etolite mgbe niile.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto nke nzọụkwụ, ihe ọzọ dị na ihe eji megharịa ọnụ anyị bụ amuru. Anyị ga-arịgo ya mana ọ bụghị nke ukwuu, ọ dịghị mkpa ịdị na-agbanwe agbanwe. Na-amaja ịkwadebe ya? Ga-ahụ, ọ na-adị mma mgbe niile.
Gelatin na ude achicha
Yi uzommeputa nnọọ mfe ime.
Nri oge: 4 awa
Oge niile: 4 awa 10 m
2 envelopes nke utu, strawberry ma ọ bụ ọkacha mmasị gị ekpomeekpo gelatin
500 ml nke mmiri ọkụ
250 ml mmiri oyi
250 g nke ude mmiri
Anyị na-agbaze envelopu abụọ nke gelatin na mmiri ọkụ. Anyị na-agbakwunye mmiri oyi ma nọgide na-agwakọta.
Anyị na-egbu ude ma ọ bụghị oke. Okwesighi ka odi n’usoro. Anyị na-agbakwunye ya na mmiri mmiri gara aga.
Anyị na-etinye ngwakọta ahụ n'ime akpa nke piom-achicha ma ọ bụ achịcha sliced.
Anyị na-etinye ya na friji ruo mgbe ọ ga-edozi nke ọma (ihe dị ka awa 4).
Iji kpughee, anyị nwere ike ịgafe mma site na ebu nke ebu na mmiri isi ya na mmiri ọkụ.
Ozi ndị ọzọ - Multicolored jelii Mozis
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka » Gelatin na ude achicha. Ihe eji eme anwansi.